Tombony azo amin'ny fanomezana voankazo ho an'ny alika | Tontolo alika
Ao amin'ny trano rehetra dia fanaontsika ny manome ny sakafonay ho an'ny alika, na dia sakafo aza ny sakafony. Ny marina dia maro amin'ireo sakafontsika no mety hahasoa ny biby fiompy, indrindra raha ampidirintsika ao anaty sakafon'izy ireo hatramin'ny fahazazany izy ireo ary omentsika antonony.
Misy voankazo tsy tsara ho an'ny alika, toy ireo voa na siramamy be loatra, toy ny voaloboka, satria mety hanimba, nefa amin'ny ankapobeny dia mahasoa koa ny voankazo ho azy ireo. Afaka mandray soa avy amin'ny fananany maro izy ireo, amin'ny rano be, ny otrikaina ary ny vitamina.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe ananan'ny voankazo dia ny azy ireo antioxidant, fibre ary vitamina be dia be. Ny alika dia handray soa ihany koa amin'ireo otrikaina rehetra ireo ary ny fibre dia hanampy amin'ny fanaraha-maso ny fifindran'ny tsinay, zavatra manan-danja raha hitantsika fa tsy manao izany matetika.
Na izany aza, manana zavatra vitsivitsy tsy tokony ho adino isika. Ny alika dia tsy hihinana voankazo misy asidra toy ny voasary na kiwi satria tsy matsiro izy ireo ary misoroka izany. Amin'ny ankapobeny dia mety tian'izy ireo ny voankazo, saingy tsy ny alika rehetra no mahita azy ireo mahaliana, noho izany dia fanontaniana fitsapana. Afaka manomboka amin'ny voankazo izay manana tsiro malefaka, toy ny akondro, amin'ny antonony foana satria be siramamy, na paoma izy ireo, ka tsy omena azy ireo ny voa.
Raha tianao ireo voankazo ireo dia afaka manohy miaraka amin'ny hafa izahay mba handray anjara bebe kokoa vitamina sy tombontsoa. Manomboka amin'ny blueberry ka hatramin'ny plum, paiso na poars. Mila manome azy ireo tsy misy voa na singa hafa foana ianao mba tsy hahatsapa ho ratsy izy ireo. Ho fanampin'izany, ny voankazo toy ny paoma dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny nifinao ary hanadio izay tartar mety ananany. Ireo voankazo ireo dia tokony omena amin'ny antonony mba tsy hiteraka olana amin'ny tsinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Tombony azo amin'ny fanomezana voankazo ho an'ny alika
Inona no anarana homena ny alikako (lahy sy vavy)